I-Lounge Bar, i-Cocktail ne-Lunch Break - I-Sport Acquedolci
Kusukela ngoLwesibili kuze kube yiSonto
Iminyaka engama-40 enkonzweni ye-Taste and Sport.
At Ibha Yezemidlalo di I-Acquedolci, bonke abalandeli bebhola bazokwazi ukuqeda ukoma kwabo kwezemidlalo ngenkathi bejabulela ukudla okuhle kakhulu I-cocktail, izifiso zokudla, Primi e izifundo eziphambili, crudité futhi I-tartare. Indawo nayo iyinhle I-Lounge Bar ngobuhle obuningi obulungele ukulungiswa ngenkathi ikhefu lasemini.
ILounge Bar, i-Cocktail neLunch Break: il IBar Sport enamagiya angeziwe e-Acquedolci
Il Ibha Yezemidlalo kanye iphuzu lomhlangano intandokazi ye I-Acquedolci hhayi kuphela abalandeli bemidlalo yezemidlalo, kodwa nangama-gourmets abafuna ukunambitha okuhle kakhulu I-cocktail kanye nokuhlanjululwa kwamalungiselelo e-gastronomic. cocktail e I-Lounge Bar ngesimo sokwamukela, zonke izici zenzelwe ukwenza ongalibaleki ukubuka imidlalo e isipiliyoni gustatory sika I-cocktail, izifiso zokudla e ikhefu lasemini. Ukusika amabhodi we ushizi e inyama ebandayo ka Nebrodi zenze kahle kule ndawo yokuhlangana enomhawu.
I-Cocktail ne-Lunch Break ngezifundo ezimnandi zokuqala nezesibili: i-Lounge Bar yathandwa ngabezemidlalo nama-gourmet
Il Ibha Yezemidlalo di I-Acquedolci inikeza kuzo zonke izivakashi zayo amakamelo amakhulu con ishermo ukubuka imidlalo yebhola kanye neminye imicimbi yezemidlalo. Ngasikhathi sinye, kunjalo ibha yekhofi elilungiselela izinsuku ezinhle kakhulu ibhulakufesi con ikhofi, UCapuchin, ama-croissants, i-brioche, u-ayisikhilimu, u-granita namabhisikidi alo lonke ukunambitheka. Indawo yokudlela izokuhambisana nokudla okuncelwayo nobungcweti usuku lonke: kusuka ikhefu lasemini kuze kube kuningi izifiso zokudla ngemisundu yomile iqhude. Lapha uzothola Primi e izifundo eziphambili di inyama e inhlanzi della Isiko lokudalwa kwezilwane laseSisilia ngikulindile nsuku zonke.
ILounge Bar neCrudité neTartare ukuhambisana nemicimbi yakho yezemidlalo oyithandayo
Eminyakeni engaphezu kwengu-40 yokusebenza, Ibha Yezemidlalo ukwazile ukwanelisa izigaxa nogqozi lwezemidlalo lwabantu abadala nezingane kusukela ngo-1981. Phakathi amakhono gastronomic uzothola crudité e Tartar, engeza kokuhle kakhulu Primi e Secondi izitsha. Indawo nayo isitolo sewayini e Ibha yewine okuhle kakhulu vini kukhiqizwe indawo e Amawayini waseSicily lokho kuzohambisana nokwakho ikhefu lasemini ukuthuthukisa ukunambitheka kokhilimu obumnandi obuzokunambitha. Uyokwelulekwa futhi usizakale ngabasebenzi abanobungane nabasondelene, ngaphansi kokuholwa okuphathelene nomnikazi UMassimo Scaffidi.
Okungaphezulu kakhulu kwe-Sports Bar: AmaSandwich, eWine Bar ne-Exericional Apericena
Il I-Cocktail Bar di I-Acquedolci izokunikeza eziningi Uphuze okomisi, i-aperitif emnandi lungela lapha ubusuku ngabunye. Bonke abalandeli bemidlalo yezemidlalo bazokwazi ukubuka imicimbi yabo abayithandayo phakathi I-cocktail nenala aperitivo, noma ukusebenzisa okungcono kakhulu iwayini. -nemfuyo Ibha yewayini ngaphezulu Amalebula ayi-80 di I-gin, irestirensi futhi inemenyu ecebile kakhulu vini e I-Champagne. Phakathi kwemikhiqizo ephethwe, uzothola uBanfi, uCantine Milazzo, uBellavista, uCa 'del Bosco. Ukuhlangabezana nokuthandwa ngumuntu wonke, Ibha Yezemidlalo futhi AmaSandwich okunezinhlobonhlobo eziningi ze panini kulabo abafuna ikhefu lokudla okusheshayo ngaphandle kokudela ukunambitheka nobuhle. The Ibha Yezemidlalo è Isibhakabhaka esigunyaziwe sendawo kokubukwa imidlalo ed imicimbi yezemidlalo zazo zonke izinhlobo.
Ikheli: I-Via Ricca Salerno, 35
Umakhala ekhukhwini: 350 5329095
Inombolo ye-VAT: 03501490837